Ogologo ikiri ụkwụ nke 9.0cm mara mma ma na-agagharị, nke na-esetịpụ na-esetịpụ ụkwụ ahụ dị gịrịgịrị, ọnụ ọgụgụ ahụ dịkwa gịrịgịrị. Ọ na-akwado ọmarịcha mma nke nwanyị na-atọ ụtọ, na ikiri ụkwụ mara mma nke ukwuu.
Nọmba nlereanya: BK 2176
Ihe: PU + Rubber
Ikiri ụkwụ Elu: Super elu (8cm-elu)
Njirimara: Anti-amị, Anti-amị, Now, Steel Mkpịsị ụkwụ, Fashion Trend, Anti-amị amị, Anti-amị amị,
Ihu igwe na-ekpo ọkụ karị, ọ bụ oge ịzụta akpụkpọ ụkwụ ọhụrụ! Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ ewu ewu nke ukwuu n'ime afọ abụọ gara aga, mana afọ a, akpụkpọ ụkwụ eriri nwere ọtụtụ ewu ewu. N'oge ọkọchị a, ọ bụrụ na ịnweghị akpụkpọ ụkwụ strappy, ihere na-eme gị ịkpọ onwe gị ejiji!
Akpụkpọ ụkwụ strappy dị nụchara anụcha na nwanyị karịa nke mbụ akpụkpọ ụkwụ otu. Egosiputa akpụkpọ anụ ụkwụ, na-egosi ike dị elu.
Maka ụmụ agbọghọ nwere ntụmkpa karị, akpụkpọ ụkwụ strappy dị ka aghụghọ pụrụ iche, na-akọwapụta ogo dị elu, nke mara mma ma dị elu nke ụkwụ ha.
Otu ụdị eriri dị mkpirikpi na-adịchaghị mma karịa akpụkpọ ụkwụ dị larịị. Girlsmụ agbọghọ ndị nwere ejiji dabara adaba maka akpụkpọ ụkwụ strappy, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ha na-eyi maka oge okpomọkụ niile, ọ naghị adị mfe ike ọgwụgwụ.
Mma nke akpịrị akpụkpọ ụkwụ strappy bụ na imewe ahụ dị mfe ma ọ bụghị na-adọta anya. Ọ nwere ike ịdị ezigbo mma na uwe ọ bụla. Nhazi ahụ dị mfe, mana o siri ike ileghara ịdị adị ya anya.
Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ uwe dị arọ ma sie ike, yana obere akpụkpọ ụkwụ dị ala ma dị mfe, na-anọpụ iche, ejiji na nkwekọ. You pụọ otu a, onye ọ bụla ga-etu ọnụ na ị ga-eyi ya.
Naanị akpụkpọ ụkwụ mara mma enweghị ike ibi nke gị
Ọnọdụ anyị kachasị chọọ igosipụta bụ ịkọwapụta usoro obi ụtọ,
Họrọ ndị na-atọ ụtọ
Nke a imewe na-amụ na-egbu maramara ogologo oge si artwork okokụre ngwaahịa
Na-egosi ọtụtụ ugboro iji gbalịa
Emechara ya emechaa na ngwaahịa agwụla
Nke gara aga: 2021 akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ dị elu
Osote: 2021 ndaeyo akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ dị elu nke 2021
Ikpochapụ Ikiri ụkwụ
Ikiri ụkwụ Maka iesmụ nwanyị
Ikiri ụkwụ maka Womenmụ nwanyị
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ dị elu maka ụmụ nwanyị
Akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị Ikiri ụkwụ
Omenala logo satin elu mma ihe ejiji ...
Cheap Price Ochie European American Style Multi ...
Transpakwanyere uzo aka mkpịsị ụkwụ elu-ikiri ụkwụ crystal w ...
Sexy inyom rhinestone ọma silk ákwà l ...
2021 ndaeyo akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ dị elu nke 2021